Nagu saabsan - Dongguan Dongwangda Qiimeynta Teknolojiyada Co., Ltd.
DongguanDongwangda Precision Technology Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo leh sannado badan oo waayo-aragnimo warshadeed ah kuna takhasustay soo saarista amarro badan oo isku dhafan R & D, naqshadeynta, farsamaynta saxda ah ee CN, iyo saxitaanka xaashida saxda ah. Xirfadleyda shirkaddu waxay ururiyeen qibrad Naqshadeynta iyo soo-saarka iyo tikniyoolajiyad wax soo saar oo heer sare ah; Waxaan bixinaa adeegyo xirfadeed iyo taageero farsamo oo loogu talagalay macaamiisha warshado badan, oo ku takhasusay qalabka baabuurta, qalabka dhijitaalka ah, qalabka kombiyuutarka, alaabada difaaca millatariga, qalabka caafimaadka, sahayda jikada, alaabta carruurtu ku ciyaarto, qalabka dhismaha Qalabka muuqaalka qaabeynta, qaabeynta iyo farsamaynta qalabka, iwm. wax soo saar tiro badan.
Dongguan Dongwangda Precision Technology Co., Ltd. waxay ku taal magaalo caan ah Shiinaha. Wax soo saarka ugu muhiimsan waa: qaabka gacanta aluminium daawaha, qaabka gacanta, farsamaynta qaabka gacanta, warshadda gacanta, aluminium ka shaqeynta wax soo saarka, saxsanaanta iyo isku darsamida aluminium isku dhafan, waxsoosaarka dufcadda dufcadda leh, qaybaha saxda ah ee saxda ah ee Waxsoosaarka dhirta, dhirta samaynta caaryada fudud, iwm. ku qalabaysan xarumo farsamo oo sax ah oo heer sare ah oo loo yaqaan 'CNC machining xarumaha, lathes, mashiinada wax shiida, mashiinka wax lagu shiido, mashiinada dhimbiillaha, makiinado faaruq ah iyo qalab kale oo durugsan, oo leh tayo la isku halleyn karo, qaab dhismeed ku habboon, iyo moodello nooc dhakhso leh leh. Waxay u fidisaa shuruudo ku habboon macaamiisha inay soo saaraan wax soo saarkooda ayna qabsadaan fursado ganacsi. Kooxdayada maarayn waa dhalinyaro, firfircoon, oo hormuud ah. Waxaan haynaa koox khibrad leh, damiir leh oo taxaddar leh, jawigayaguna waa nadiif oo nadiif ah. Kuwaas oo dhami waxay bixiyaan dammaanad dhammaystiran oo ku saabsan soosaarka moodooyinka noocyada casriga ah.
Shirkaddu hadda waxay leedahay nidaam maareyn ganacsi oo hufan, waxay si joogto ah u xoojisaa maareynta gudaha, waxay hagaajisaa heerka farsamo iyo awoodaha maaraynta ee shaqaalaha, waxayna "ku guuleysataa kalsoonida macaamiisha tayada, waxay ku guuleysataa kalsoonida macaamiisha teknolojiyadda, waxay ku guuleysataa macaamiisha qanacsanaanta adeegga, waxayna ku guuleysataa macaamiisha daacadnimo "" Wanaagsan "waa himilada dhammaan asxaabteyda; "Waxtarka sare, tayada aadka u fiican, muddada bixinta-bixinta, qanacsanaanta macaamilka" waa jihada horumarka loo dhan yahay ee dhammaan asxaabteyda. Waxaan aaminsanahay in aasaas adag oo keliya ay sameyn karto horumarka boodka. Shirkaddu had iyo jeer waxay u hoggaansameysaa ruuxa "midnimada, hormarinta, shaqada adag iyo horay u socoshada" iyo "fiirsashada, ka faa'iideysiga labada dhinac, mahadcelinta" falsafadda ganacsiga. Iyada oo ku saleysan mabaadi'da hubinta tayada, qiimaha macquulka ah, gaarsiinta degdegga ah iyo u janjeedha adeegga, waxay ku qaadataa abuurista Shiinaha mas'uuliyaddeeda waxayna abuureysaa tamar-badbaadin cusub Hadafka waqtiyadu waa "silsiladda warshadaha ee ilaalinta deegaanka ee ilaalinta deegaanka, laga soo bilaabo hal-abuurka soo-saarka illaa hal-abuurnimada warshadaha. ". Sumcadda shirkadda waxaa si wanaagsan u soo dhoweeyay macaamiisha.
Shouban model-hardware, caag, elektaroniga iyo naqshadeynta wax soo saarka kale iyo cilmi baarista iyo horumarinta, Qaabeynta Shouban model, naqshadeynta caaryada iyo waxsoosaarka, waxsoosaarka badeecada, soosaarida qeybaha, horumarinta qalabka otomatiga Dongguan Dongwangda Precision Technology Co., Ltd. waxay si buuxda u adeegsaneysaa barnaamijka caalamiga ah ee CAD / CAM / CAE: PRO / E, UG, SOLIDWORKS, MASTERCAM, AUTOCAD, waxayna korsatay naqshadeynta, injineernimada dib udhaca, qaabeynta qaabeynta, soosaarka noocooda, caaryada wax soosaarka si loo yareeyo Wax soo saarka adeegga hal-joogsi wuxuu si weyn u gaabinaa wareegga horumarinta wax soo saarka, wuxuu badbaadiyaa kharashaadka horumarka, wuxuuna hagaajiyaa tartanka suuqa ee alaabada.
1. Soosaarida muunada qalabka: (Waxyaabaha: aluminium-ka, aluminium zinc, naxaas cas, naxaas, magnesium alloy, tantalum, shaabadaynta nikeelka nikkel, foorarsiga, iwm);
2. Wax soo saarka guddiga gacanta ee saxda ah ee CNC (qalabka ABS, PC, PP, POM, PMMA, PA, PPS, PE, Bakelite, iwm)
3. Iskudarka Vacuum (Dufcad yar) (Waxyaabaha: ABS, PC, PP, PMMA, PVC, caag, qalabka heerkulka sare u adkaysta, iwm);
4. Qaabka noocyada dhakhsaha badan ee Laser, SLA, SLS;
5. Qaab fudud: inta badan waxaa loo isticmaalaa wax soo saarka ballaaran, wareegga furitaanka caaryada gaagaaban, tayada wax soo saarka jaban iyo waxqabadka maaddada oo la jaan qaada caaryada rasmiga ah;
6. Daaweynta dusha sare sida saliida lagu buufiyo, xalashada dubista, boodhka, daabacaadda shaashadda xariirta, electroplating, qayilo, xardho laser, sawir silig, iwm
Kala duwan ee wax soo saarka:
1. Naqshadeynta wax soo saarka warshadaha, qaabeynta qaab dhismeedka 3D;
2. Gawaarida, mootooyinka, gawaarida caruurtu ku ciyaarto, iyo habab kale oo gaadiid iyo qaybo kala duwan oo waaweyn iyo yar yar;
3. Wax soo saarka isgaarsiinta sida taleefannada, mashiinnada fakiska, taleefannada gacanta, lugaha lugaha lagu ciyaaro, iyo gambaleelka albaabka ee isgaarsiinta;
4. TV-yada, kormeerayaasha, qaboojiyeyaasha, nadiifiyeyaasha faakiyuumka, qoyaanka, iyo qalabka kale ee guryaha;
5. Caruusadaha caruusadaha lagu ciyaaro, tirooyinka jilitaanka, jaangooyooyin gaar ah oo loogu talagalay warshadda qalabka elektarooniga ah, howlaha waxqabadka;
6. Soosaarida noocyo kala duwan oo ah noocyo aluminium ah oo noocyo kala duwan ah, aluminium fara badan iyo alaabooyinka la isku duro;
7. Qeybaha kala duwan ee mashiinada, B-mashiinada, qalabka elektarooniga, iyo qalabka caafimaadka;
8. Sanduuqa ilkaha ee ficil farsamo, SLA nooc dhakhso ah oo nooc ah;
9. Vacuum wax soo saarka caaryada badan, cirbadeynta saliidda, daabacaadda shaashadda, sawir silig, iwm.
5 dhidibka CNC Lathe, Farsamaynta Xarunta Mashiinka Cnc, Guddi Gacmeedka CNC, CNC ahama Steel Processing, Shell Qalabka Qalabka, Qalabka Qiimeynta Cnc,